Rooblow Cadaaladdu waxay ka billabaneysaa 14-ka April | KEYDMEDIA ENGLISH
Rooblow Cadaaladdu waxay ka billabaneysaa 14-ka April
In Fahad Yaasiin loo diido shahaadada kursiga uu soo xoogay, waxa ay fududeyn kartaa in afarta so sano ee soo aaddan la saxo khaladaadkii ay kooxda waqtigu ka dhamaaday, dalka, dadka iyo dowladnimadaba ka galeen iyo in lala xisaabtamo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaare Rooble, wuxuu xalay ballan qaaday in uusan ka hari doonin caddaalad u raadinta Ikraan Tahaliil Faarax iyo Allaha u naxariistee Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, oo labaduba ku maqan gacanta Fahad iyo Farmaajo.
Ma ahan wax qarsoon in Rooble, waqti galiyay kiiska Ikraan, isla-markaana uu xalay si laab-xaaran uga hadlay dilkii Xildhibaan Aamino oo loo khaarijiyay si loo hor istaago caddaalad u raadinta Ikraan, hayeeshee, Rooble, waxaa looga fadhiyaa tallaabo intaas ka weyn.
Sida ku cad jadwalka dhawaan ka soo baxay Guddiga Doorashooyinka heer Federaal, 14 maalin ayaa ka dhiman dhaarinta xildhibaannada baarlamaanka 11-aad, [Kuwa hadda diyaarka ah] sidaas daraaddeed, maalintaas ayaa Rooble looga fadhiyaa tallaabada 1-aad.
Guddiga Doorashooyinka (FEIT), waxa ay 21 February 2022, si cad u diideen, boobkii Fahad Yaasiin ku qaatay kursiga HOP086, 20 February, halka ay xilligaas ka hor hakiyeen doorashada kursiga, haddaba Rooble, waxaa looga fadhiyaa inuu go’aankaas sii adkeeyo.
Sida uu jadwalka doorashadu dhigayo, isla-markaana uu shalay Ra’iisul Wasaaruhu sheegay, xubnaaha soo baxay waxaa shahaaddooyinka rasmiga ah ee xildhibaannimo la siinaya 14-ka April, waana in Rooble hor istaago in Fahad Xildhibaan loo aqoonsado.
Guddiga doorashooyinka heer Fedaraal, waxaa la rumeysan yahay in ay ku daaban yihiin Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, hayeeshe, wax kasta ayaa is baddeli kara, waana in Rooble, furo jidka loo maro caddaalad radinta Aamino iyo Ikraan oo ah hor istaagidda Fahad.
Sidoo kale, Rooble, waa inuu hor istaago shahaado siinta, Yaasiin Farey iyo Kullane Jiis, maadaama uu gacmahooda ka qoyan yahay dhiigii Ikraan Tahliil, waana inuu ayido go’aannada FEIT, ku diidday natiijada qaar ka mid ah kuraasta.
Fahad in ka badan 30 sarkaal oo ka tirsan NISA, ayuu ka dhigay xildhibaanno, si uu af-duubo baarlamaanka 11-aad, si aysan taas u dhicin waa isaga la hor istaago, waxna laga weydiiyo wixii uu dalkaan dhibaato u geystay isagoo Al-Shabaab adeegsanaya.